Sida loo sameeyo emoji sawirka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Samee avatars ama emojis Had iyo jeer waxay ahayd hawl hal abuur leh oo aad ku muujin karto hal-abuurkaaga codsiyada sida WhatsApp ama Facebook, gaar ahaan marka la sheekaynayo ama laga jawaabayo faallo lagu dhejiyay sawir uu ku jiro.
Maqaalkan, waxaan u nimid inaan xallino su'aashaas oo aad maskaxda ku haysay, Sideen u abuuri karaa avatar ama emoji sawir leh? Hagaag, waxaan ku tusi doonaa cashar yar oo aan adeegsaneyno mid ka mid ah codsiyada ugu caansan ee ay horey u isticmaaleen isticmaaleyaal badan oo internetka ah sidoo kale waxaan ku tusi doonaa kuwa kale oo aad la soo degsan karto oo aad isku dayi karto.
1 emoji ah
2.1 Tallaabada 1: Qaad sawirka
2.2 Tallaabada 2: Tafatir avatar-ka
2.3 Talaabada 3: stickers ama emojis
3 Apps si loo abuuro emojis
3.3 Wejiga cam
3.4 Wajiga Q
Kahor intaadan bilaabin casharka, waxaanu kuu soo bandhigaynaa in yar oo ku saabsan fikradda Emoji iyo waxa emoticon noocaan ah loogu talagalay.
emojis waa la qeexay sida sawiro taxane ah oo gudbiya oo la xidhiidha fariimaha iyadoo la adeegsanayo odhaah ama fikrado. Taas macnaheedu waa, iyaga oo ku mahadsan, waxaan aqoonsan karnaa xaaladda maskaxda ee qofka isticmaalka ama isticmaalka mid ka mid ah. Waxay hadda ku jiraan codsiyada iyo shabakadaha bulshada intooda badan, habkan ayaa sidoo kale suurtogal ah in lagu soo jiito dareenka dadweynaha maadaama ay aad u qancinayaan.
Dareen-celintu waxay leeyihiin sifada ugu weyn ee lagu beddelo farriinta afka ah qoraal si degdeg ah oo fudud loo fahmi karo. Taasi waa sababta ay maanta, u noqdeen xubno muhiim u ah isgaadhsiinta oo ay ka caawiyeen dad badan inay la xiriiraan. Waxaa hubaal ah in loo dejiyay inay fududeeyaan luqadda iyo hadda waxaynu ka heli karnaa shabakadaha bulshada iyo kiiboodhka mobaylada labadaba. Shaki la'aan, waxay noqon doontaa sifaha ugu muhiimsan ee lagu muujinayo mar haddii luqaddu ay ka jirto nolol maalmeedkeena oo ay muhiim tahay in la fahmo habka aan u wada xiriirno.
Tilmaamaha kale ee lagu muujinayo waa inay aad faa'iido u leeyihiin haddii aan ka hadalno suuq-geynta. Waxay leeyihiin xiriir gaar ah mar haddii loo tixgeliyo waxyaabo aad loogu qancin karo, taas oo ah, in badan oo emojis ah oo aad ku darto sharraxaadda badeecada, tirada badan ee booqashooyinka aad ku yeelan doonto daabacaadda. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaad tixgeliso emoticons haddii aad ka shaqeyso adduunka shabakadaha bulshada, tan iyo waxay muhiim u yihiin aqoonsiga shirkad ama xisaab gaar ah. Sidaa darteed, ha iloobin inaad ku dabaqdo qaar ka mid ah emojis qoraalka oo hubaal tilmaantu waxay noqon doontaa mid aad u xiiso badan.
Naqshadaynta emoticons waa saldhigga ugu weyn ee abuurkooda, Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxaa loogu talagalay inay noqdaan kuwo shaqeynaya oo keliya. Marka aan ka hadlayno wax shaqeynaya waxaan ula jeednaa in loo sameeyay ujeedo gaar ah, waana sababta sida loo naqshadeeyay aad sidoo kale u jimicsato howlahooda. Tusaale ahaan, isku mid may ahayn in lagu naqshadeeyo iyaga oo leh waji labajibbaaran mar haddii jidhkeennu ka duwan yahay, ama indho iyo san qariib ah. Waxaa loo qorsheeyay in ay daboolaan baahiyo isgaarsiineed oo isku mid ah.
Tababarkan, waxaan halkaan u joognaa inaan kaala hadalno abuuraha caanka ah ee Bitmoji avatars iyo stickers. Waa codsi loo heli karo Android iyo iOS labadaba waana mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la soo dejiyo oo ay isticmaalaan isticmaalayaashu sannadihii u dambeeyay.
Kahor intaadan bilaabin casharrada, waxaad u baahan doontaa inaad ku soo dejiso Play Store ama Apple Store oo aad ku rakibto. Marka aad furto, waxa ugu horreeya ee aan samayno waa in aan galno, mid ka mid ah sifooyinka uu leeyahay codsigan waa in ay ka shaqeyso Snapchat oo aad gali karto haddii aad hore u lahayd xisaab Snapchat ku xidhan. Marka aad isku xirto, waa inaad muujisaa oo kaliya jinsiga.
Tallaabada 1: Qaad sawirka
Mid ka mid ah waxyaabaha ay naga codsan doonto in aan sii wadno habka iyo horumarinta codsiga, waa in aan isticmaalno kamaradda si Bitmoji ay u yeelato. tixraac yar oo ka mid ah muuqaalkeena jireed oo markaa awood u yeelatid inaad hadhow abuurto avatar ama emoji.
Xilliga wax la mid ah ay u muuqdaan sida aan kuugu muujineyno sawirka, waxay ku weydiin doontaa marin yar si aad u furto kamaradda casriga ah, kaliya waa inaan siinaa marin u helka si uu u sii wado qabashada sawirka.
Tallaabada 2: Tafatir avatar-ka
Xigasho: Android Pro
Marka aan qaadno sawirka, codsigu wuxuu ina tusi doonaa muuqaal muuqaal ah oo avatar gaar ah. Anaga Waxaan sii wadi doonaa inaan u tafatirno si ka wanaagsan muuqaalkeenna jireed. Sida aad arki karto, sawirka aan ka soo qaadnay wajigeena waa kaliya in aan u adeegno hage oo sidaas awgeed awood u leh in aan tafatiro avatarkeena.
Qeybtaan waxaad ku habeyn kartaa midabka timaha, qaabka wejiga, indhaha, sanka ama xitaa dhererka sunnayaasha.
Talaabada 3: stickers ama emojis
Waxa codsigan lagu sifeeyo ayaa ah in marka aanu samayno avatar-kayaga, uu codsigu si toos ah u samaynayo istiikarro taxane ah oo nooc kasta leh, taas oo ku xidhan xaaladda maskaxda ee aad naftaada ku aragto ama xataa ay tahay inaad u hambalyeeyso maalmaha dhalashada ama dhacdooyinka bulshada qaarkood.
Waxaad ku isticmaali kartaa istiikarradan wada sheekaysiga waxayna u shaqeeyaan sida istiikarrada caanka ah ee WhatsApp. Aad bay u qosol badan yihiin waxayna bixiyaan taabasho farxad iyo animation mar walba. Isku day inaad naqshadayso avatar-kaaga oo bilow isticmaalka dhejiska.
Apps si loo abuuro emojis
Waa codsiga ugu badan ee lagula taliyay marka loo eego isticmaalayaasha internetka iyo tii aanu hore kuugu tusinay casharkeena. Waa codsi uu sameeyay sannadihii 2007/2008 qiyaastii wuxuuna ku xiran yahay shabakadda bulshada ee Snapchat ee caanka ah. Halkii, Snapchat wuxuu go'aansaday inuu iibsado arjigan si isticmaalayaasha adeegsada ay u lahaadaan emojis iyo stickers wejigooda oo ay u noqdaan wax lagu daro arjiga ku jiray internetka oo la isticmaalayey sannado badan. Marka la soo koobo, waa codsiga ugu fiican haddii waxa aad raadineyso ay tahay madadaalo iyo madadaalo.
Memoji waa codsi xiddigeed oo u shaqeeya si aad u gaar ah. Hagaag, si gaar ah looguma heellan abuurista Emojis, laakiin waxay leedahay suurtogalnimada in lagu tafatiro sawiradaada iyada oo loo marayo qaybta meeraha ay bixiso. Sidan waxaad ku helaysaa sawirro madadaalo iyo madadaalo badan leh. Codsigan wuxuu diyaar u yahay labada Android iyo iOS wuxuuna ka mid ahaa kuwa ugu badan ee la soo dejisanayay bilihii u dambeeyay. Waa codsi ku habboon haddii waxa aad raadineyso ay tahay inaad bixiso taabasho madadaalo iyo hal-abuur leh sawiradaada iyo, dhammaan ka sarreeya, si loo gaaro saameyn xiiso leh iyada oo ay ugu wacan tahay qalabkeeda.
Kamarada wajiga waa codsi si gaar ah loogu talagalay in lagu abuuro avatars qaab 3D ah. Waxay la mid tahay bitmoji maadaama ay u oggolaanayso tafatirka iyo abuurista dhinacyada sida midabka timaha iyo qaabka, midabka maqaarka, qaabka wejiga, midabka indhaha, dhererka, jinsiga, iwm. Ma aha oo kaliya inay leedahay qaybta animation ee kordhinteeda 3D, laakiin sidoo kale waxaa suurtagal ah in la abuuro muuqaallo firfircoon la avatars aad u qaabeeyey. Waa codsiga ugu fiican haddii waxa aad rabto ay tahay animation iyo madadaalo.
FaceQ waxaa lagu gartaa dhinaca fanka badan, maadaama ay ogolaato abuurista emojis qaab kartoonada ah. Waxa kale oo ay leedahay qaybta tafatirka ee dhinaca jirka ah oo ay shaki la'aan ahayd mid ka mid ah codsiyada ugu badan ee la isticmaalo ay sabab u tahay interface iyo navigation fudud. Sidoo kale, mahadda dhalisa avatar-keeda otomaatiga ah, waxaad ku heli kartaa emojis-kaaga ama avatar-kaaga kaliya adigoo riixaya badhanka. Waa codsiga ugu fiican haddii aad rabto natiijooyin badan oo hal abuur leh iyo farshaxan maadaama ay shaki la'aan ku qaadato abaalmarinta codsiga ugu fanka badan iyo kuwa firfircoon ee soosaarayaasha emoji.
Zepetto waa codsi sidoo kale aad ugu eg Bitmoji, waxa lagu gartaa codsigan aad u badan ayaa ah in aad u baahan tahay ogolaanshaha kamarada si aad u awooddo inaad iska qaado sawirka oo sidaan ayuu codsigu ku tusayaa avatar-kaaga 3D. Waxa kale oo lagu sifeeyaa sababtoo ah waxay leedahay muuqaalo aan dhammaad lahayn ama dhaqdhaqaaq firfircoon oo siinaya avatarkaaga taabasho animation. Dhab ahaantii, Haddii aad jeceshahay interface-ka iyo habka Bitmoji u shaqeyso, waxaad sidoo kale u badan tahay inaad ku jeclaan doonto codsigan fudud oo gaar ah. sida moodo noqday.
Sidaad awood u yeelatay inaad xaqiijiso, u beddelka sawirka emoji-ga waa hawl fudud in la fuliyo maadaama aan hadda haysanno kumanaan iyo kumanaan qalab oo bixiya shaqadan. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad isku daydo oo aad soo dejiso qaar ka mid ah codsiyada aan soo jeedinnay.
Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale baari kartaa wax badan oo ku saabsan abuurista emoticons, maadaama ay leeyihiin sheeko aad u xiiso badan oo ka dambeysa, gaar ahaan haddii aad naftaada u hurto aduunka naqshadeynta sawirada oo aad sameyso sawiro. Marka la soo koobo, waxay yihiin walxo qumman oo, inkastoo ay yar yihiin, buuxiyaan shaqooyin waaweyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Sida loo abuuro emoji sawirka